Ubeka kuphi ukukhiya kwakho ibhayisikili lapho ugibela iReddit? - Ukugibela
Main > Ukugibela > Ukubeka kuphi ukukhiya ibhayisikili ngenkathi ugibele - ukuthi ungaxazulula kanjani
Ubeka kuphi ukukhiya kwakho ibhayisikili lapho ugibela iReddit?
Yebo, okungcono kakhuluindawoOkweingidiikuhlaka noma ku-pannier. Uma kusinda ngokwaneleingidiukuze uphumelele, awufuni ukukuthwala kumuntu wakho. Ngithanda i-kryptoniteukukhweza.
Kunabantu abane-IQ ekhanyayo impela. Ochwepheshe abanezinwele ezinkulu abacabanga ngaphandle kwebhokisi futhi bathole izindlela ezintsha ezimangalisayo zokwenza izinto. Bangamakhosi ekutholeni izikhala bese bewasebenzisela ukuzizuzisa bona.
Kepha lezi akuzona izigebengu, laba bantu abahlakaniphile basebenza kakhulu ngaphakathi kwemithetho. Usanda kuthola indlela yokushaya uhlelo emdlalweni walo. Ingabe usukulungele ukuhlangana nabantu base-3021? Asikwenze! Kutholakale emnyuziyamu eJapane kukhona iqhinga lokugcina lomkhosi.
Ebhokisini le-plexiglass elicacile kunebha yegolide eqinile engamakhilogremu ayi-12 ebiza ngaphezu kwama- $ 650,000. Kusikwa imbobo encane ohlangothini lweplastiki ecwebezelayo ethe ukuba kancanyana nje kunengalo yomuntu. Futhi ibekwe phezulu ngokwanele ukwenza ukuhambisa ibha kube yinkohliso encane.
Noma kunjalo, ngenhlanganisela yezinhlanganisela zezandla, amandla eminwe amangalisayo, nokuzimisela okukhulu, abanye bathole indlela yokunqoba le nselele ebonakala ingenakwenzeka. Ngeshwa, lezi zihlakaniphi azikwazi ukugcina igolide. Esikhundleni salokho, abawinile bazothola ikhadi elifakwe ngegolide elibiza cishe ama- $ 40.
Umklomelo wenduduzo ngicabanga. Sonke sidlale umdlalo womshini uzipho ku-arcade ngamazinga ahlukene empumelelo. Kubukeka kungakhathalekile ukuthi isikhathi sakho nokuma kwakho kuphelele kangakanani, umdlalo ubonakala nje ukuthi ukhonjelwe wena.
Noma ubambelela kahle kuthoyizi elibushelelezi, uzipho uhlala unika indlela ngaphambi nje kokuba ifinyelele kwisilayidi. Akunakwenzeka, kepha imvamisa izindleko ezi- $ 2 emizameni engaphumeleli zibiza ama- $ 50. Lokhu kuholela kubantu abasungula izindlela ezihlakaniphile zokulinganisela inkundla yokudlala.
Kulokhu, odonsa abanele ngokwanele ukuheha insimbi yethoyizi ngengilazi ukuze bathathe indawo yabo. Okukhazimulayo! Emhlabeni wosaziwayo nabathonya bezokuxhumana, kwesinye isikhathi kufanele ukukhohlise uze ukwazi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngoJosh Pieters, i-YouTuber ezinze eLondon owadlala umgilingwane omangalisayo owakhohlisa amakhulu kumdlalo wesibhakela we-LA.
okhilimu bezemidlalo bemisipha ebuhlungu
Ngo-2019, uJosh Ty, umdlali waseManchester u-Ed Sheeran doppelganger, wamqasha futhi wamhambisa ngendiza eya e-United States ukuze azobamba iqhaza emdlalweni wesibhakela phakathi kweKSI neLogan Paul. UJosh noTy bathola ukwelashwa kwe-VIP, futhi abalandeli abaningi bacela izithombe nalo saziwayo mbumbulu. Iphephandaba lase-UK laze lakhipha udaba olumayelana nokubamba iqhaza kukaSheeran kulo mcimbi! Yize kungenzeka ukuthi badukise wonke umuntu lapho, i-inthanethi ayikholwanga.
Uma ungaqiniseki ngamakhono akho kumdlalo wakudala uzipho womshini, kunezinye izindlela zokushaya uhlelo. Vele, awusoze wakuphinda okubonayo, kepha kwesinye isikhathi kufanele uthinteke ngokucabanga kwakhe ngaphandle kwebhokisi. Noma kufanele ngithi ebhokisini ..
Lo mbhalo wokuqala udutshulwe eTaiwan kanti umlingiswa oyinhloko we-athikili yethu uyindoda esekhulile. Ukhulile futhi uguquguquka kakhulu ngendlela ebukeka ngayo, futhi oh ubonakala ewathanda kakhulu amathoyizi.
Kubukeka sengathi lo mfana angagoba noma iyiphi ingxenye yomzimba wakhe. Kuyamangaza ukuthi aqhamuke nokuthile okufana nalokhu, kodwa ekugcineni wayifeza inhloso yakhe. Kepha hhayi kuphela abantu abadala ababonakala bekwazi ukwenza lokhu.
Kwesinye isikhathi ngisho nezingane ezincane ezingenacala zizama, njengengane ekulesi siqeshana. Lokho kungenzeka, ngicabanga, uma ungahlushwa yi-claustrophobia. Uma ufuna ukuqonda umdlalo ngomshini uzipho, uzodinga okungenani izinto ezintathu.
Ukuqonda kwe-physics, inhlanhla encane nezindawo eziningi zokuhlala. Kepha kunento eyodwa ngaphezulu yokuthi yonke imidlalo yokulwa yakudala iyazi kahle kakhulu. Ubuciko bokucindezela inkinobho.
Kwesinye isikhathi ama-super combos ashubile kakhulu angadalwa ngokumane ucindezele ukhiye ngamunye ngokushesha nangokungahleliwe ngangokunokwenzeka. Isibonelo, ukuthi lo mfana uzulisa kanjani uzipho ukuze enze ijubane futhi ekugcineni axhume intengo yakhe ngokuphelele. Ngemuva kokuthi umFulentshi uRémi Gaillard exoshiwe emsebenzini wakhe esitolo sezicathulo, wanquma ukunikela ngempilo yakhe ekwenzeni imigilingwane emikhulu lapho afaka khona amaqembu ezemidlalo adumile ngokuzenza umdlali nokuzifaka emikhosini.
Wakwazi ukubamba iqhaza emcimbini owawusanda kudlalwa ngemuva kokuthi uLorient enqobe owamanqamu weCoupe de France wango-2002, ejabula nabadlali waze wathola nokuxhawulwa nguMongameli waseFrance ngaleso sikhathi uJacques Chirac! Kodwa kwakuyi-prank yakhe kwi-World Volleyball Championship ka-2015 eyathatha ngempela ikhekhe. URémi owayezifihle njengomdlali we-volleyball waseFrance, wehla ezitezi enganakile, njengoba neqembu laseFrance elaliphumelela lalilungiselela isithombe seqembu lalo. Usomahlaya ungene ngokungenamthungo futhi wabulawa esithombeni esisemthethweni seqembu! Ibhomu lokugcina lesithombe.
UBill Gates wake wathi, “Ngikhetha umuntu oyivila ukuthi enze umsebenzi onzima. Ngoba umuntu oyivila uzothola indlela elula yokwenza. ”Kuneqiniso eliningi ngalokhu, ikakhulukazi emhlabeni wokwakha.
Kungani uzidinisa ngokuthile okutholwa umshini ngokushesha? Lesi sisebenzi sithole ukuthi akuyona yonke imisebenzi edinga ukudela imigqa yakho yamadolo, ikakhulukazi uma unomuntu osebenzisa imishini. Kungani kufanele usebenze kanzima ngenkathi ungakwazi ukusebenza kanzima? Ehlobo lika-2017, amazinga okushisa ase-UK anyukela ezindaweni eziphakeme ezaqoshwa kusukela ngo-1976. Abafana abaningana abavela e-Isca Academy eDevon babuza ukuthi bangakwazi yini ukugqoka izikhindi ukumelana nalokhu kushisa okukhulu.
Othisha basiphothula ngokushesha isicelo sabo, bathi izikhindi zazingeyona ingxenye yemihlahlandlela esemthethweni yokufaniswa. Ngesikhathi abafana bekhomba ukuthi amantombazane angakwazi ukugqoka iziketi, othisha bancokola bathi uma abafana befuna ukugqoka iziketi, bangenza njalo. Futhi ngalokho kwavela ukuhlubuka.
Abafana abangafika ku-30 ​​bavele emakilasini kadadewabo bekhalaza ngalezi ziqondiso. Bakhululekile ekushiseni futhi baphoqa isikole ukuthi sicabange kabusha imithetho yaso efanayo. Yize singeke savumela ukweba noma ukubamba inkunzi, kwesinye isikhathi kufanele uhlale phansi ubabaze ubuqili bezigebengu ezithile ezishelelayo.
Njengalo mfana ovele wabuza leso sisebenzi sikaRolex ukuthi angabheka iringi engu- $ 16,000 ekukhanyeni kwemvelo. Uyavuma futhi bame emnyango ngenkathi yena enza sengathi ubabaza izimfanelo zakhe ezikhazimulayo. Lapho embuyisela ngaphakathi, uhamba ngokunganaki sengathi akwenzekanga lutho.
Kuthatha isigamu somzuzu ukuthi umabhalane abone ukuthi ubanjwe inkunzi. Ngenhlanhla, ngemuva nje kwalokho wabanjwa futhi ubulungiswa benziwa. Ukulungiswa kwendawo nokugcinwa kotshani kuwumsebenzi omuhle uma ufuna ukuhlala uphilile futhi uhlole okuhle ngaphandle.
Kuthatha ukuhamba okuningi. Imigqa emide icindezela umshini wokugunda utshani noma intambo ukusika phezulu naphansi komgwaqo. Kuwumsebenzi onzima! Ngenhlanhla, kukhona abanye balimi abaphila ngonyaka ka-3021.
Kungaba lokho noma abakwazi ukukhokhela umgibeli wokugibela ofanele. Noma kunjalo, udinga ukusiza lo mfana othole ukuthi angawenza kanjani umsebenzi wakhe phakathi nesikhathi ngenkathi uzijabulisa futhi. Ngo-2018, i-intanethi yagqamuka amalangabi lapho isithombe esithunyelwe ngokungaziwa sikaJustin Bieber esidla i-burrito esinqunyiwe sasakazeka kwi-subreddit ethukuthele kancane.
Kuzovela imibuzo emibili ehlukene. Ingabe kwakunguYustin Bieber ngempela futhi yindlela abanye abantu abadla ngayo ngempela ama-burritos? Kubukeka sengathi umbuzo wesibili ububaluleke kakhulu kubantu njengoba wonke umuntu ebebonakala ekwamukela ukuthi lena bekuyimfashini ye-quintessential engenakhaya evela kuBeebs. Kutholakale ukuthi kube yi-PR stunt evela esiteshini esidumile se-YouTube i-Yes Theory, futhi i-athikili yabo edalula i-prank yabo ibinokubukwa nokubalwa kwezigidi ezingama-21 kusukela lapho.
Akukho lutho olukhungathekisayo njengokulahlekelwa amathikithi ekhonsathi yakho oyithandayo noma umdlalo wezemidlalo. Noma ngabe kuthengisiwe noma awusemukelekile, abanye abantu bakuthola kungenakwenzeka ukungena. Njengasendabeni yomlandeli webhola laseTurkey u-Ali Demirkaya.
Ngenxa yezizathu ezingaziwa, u-Ali wayevinjelwe ukuba yingxenye yemidlalo eDenizli Ataturk Stadium. Ngakho-ke, uthole isisombululo esingafaki ukungena ngokungemthetho. U-Irregular Ali, njengoba ebizwa kanjalo, waqasha i-crane wayipaka ngaphandle kwenkundla ukuze avuke ajabulele umdlalo.
Umlandeli okhuthele uphephezelisa amafulegi futhi wahola izingoma njengoba emangazwa ubuhlakani bakhe obubi. Ngicabanga ukuthi ukuzifihla bekuzoba lula. Ngiyakuzonda ukuthi ngingakusho, kepha; Uma usuvelile ayikho indlela yokuma.
Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kulo mbhali ongumbhali, umsunguli ongacasukile owayekhungathekile emsebenzini ngezinga lakhe lokudla eliphansi. Esikhundleni sokudela umsebenzi oyigugu noma ivolumu ye-pringle, wakhe ithuluzi elinobuhlakani lokuphakela i-chip elingenazandla ukwanelisa lezo zifiso eziphakathi nendawo. Manje inkinga yakhe kuphela ukulayisha kabusha amathini angenalutho.
Kwesinye isikhathi isithukuthezi kungaholela ekusungulweni okungenamsebenzi kwamahlaya. Kunamakhethini omlomo, izingwenya zezandla futhi ungakhohlwa izisuli ze-iPhone lens. Kepha kwabadlali bakho begalufu abathanda imisebenzi yasehhovisi, manje usungakwazi ukubeka okuqukethwe yinhliziyo yakho.
Ngeke uphinde ukhathazeke ngokugibela ngaphansi kwamatafula osebenza nawo ukuthola amabhola akho aphambukayo. Isingeniso se-Putting Rod. Asazi kahle ukuthi kungani, kepha uma kukhona ama-fidget spinner lokhu kufanele kudume kakhulu.
Akungabazeki ukuthi amapaki wokuzijabulisa ayakhathaza. Kunamathikithi abizwe kakhulu, olayini abade, nama-karen amaningi engingakubala. Noma kunjalo, njengomzali, uhlala ufuna ukunika izingane zakho injabulo yokuhamba nge-roller coaster ngejubane eligcwele.
Ngakho-ke uma umntanakho emncane ngokwanele ukugibela ama-monster coasters, yini into elandelayo elandelayo enhle? Ukuhamba ngokoqobo okubonakalayo ngesikrini esikhulu nobaba abalingisa ukunyakaza kwemoto ukuze kube ngokoqobo okungeziwe. Masithembe nje ukuthi awekho ama-loop-the-loops.
Kufanele ngiyikhuphule kuphi ingidi yami yebhayisikili yasentabeni?
Khiyaeyakhoibhayisikiliendaweni ekhanyiswe kahle enezimoto ezihamba ngezinyawo.Khiyangokuya ngenani lenani kuqala, bese kuba isondo langemuva, ekugcineni isondo langaphambili. Thola ukulingana okufanele! Igumbi elincane ngaphakathi kwe-u-ingidinoma uchungechunge, kuzoba nzima kakhulu ngamasela ukusebenzisa amathuluzi awo.
Ukwebiwa kwebhayisikili lakho lezintaba kuyinto embi kakhulu engenzeka kunoma ngubani kithi oshayelayo amabhayisikili, futhi uma ukhiya ibhayisikili lakho emphakathini, kungcono uqiniseke ukuthi liphephe ngempela. Manje sizokukhombisa ukuthi lisengozini kangakanani ibhayisikili lezintaba futhi sizokukhombisa ukuthi ungenza kanjani ukuthi ibhayisikili lakho liphephe futhi livikeleke ngangokunokwenzeka. (Hissing) (ummese wokucija umsindo) Noma ibhayisikili lakho likhiyiwe, akuphephile.
Yonke ilokhi ingabonakala ukuthi ubuchwepheshe bwephuliwe, kungakhathalekile ukuthi iyasikwa, iphihliziwe, ihlutshiwe noma ivuliwe. Ukhiye wokubanjwa kwebhayisikili lakho ukuthi ulishiya kalula livulekele kanjani isela. Ngakho-ke ngizozama okuthile lapha.
Ngizozama ukuntshontsha ibhayisikili lami ukuze ngifakazele okuthile kuwe. Ake sibone ukuthi isebenza kanjani. Ungahle uzibuze ukuthi kungani ngigqoke ivesti eliphuzi elikhanyayo hhayi, ngokwesibonelo, itop emnyama emnyama, engabonakali.
Kahle kahle umbono wami uthi amasela awakhathalele. Ukuvuleka kuyinqubomgomo ehamba phambili. Ngicabanga ukuthi ngizozama ukwenza okufanayo. (umculo we-quirky) (ukushaya ikhwela) Ngakho-ke ugu lucace bha futhi ngeba ngesobala ibhayisikili lami Thembeka, kulungile ngakho-ke ukuzikhulula okuncane: Ngisebenzise ukhiye ongabizi ngempela walokhu kanye nabasiki bezinsimbi, zilungele Umsebenzi onzima we-8mm stud.
Kepha iphuzu ukuthi, bengifuna ukukhombisa ukuthi ngingavele ngiyothatha ibhayisikili lami, akekho owayenaka, noma yini. Vele, kunezimo ezahlukahlukene zalokhu futhi kungenzeka ukuthi uke wambona uCasey Neistat esiteshini sakhe se-YouTube ukuthi wenza kanjani umsindo omkhulu futhi namanje akakhangi. Kepha ngifuna ukugcizelela iphuzu, kumayelana nokuhamba ngebhayisikili obala.
Ngakho-ke noma yini oyenzayo, kufanele uyithole kahle. Ngakho-ke ake sibuyele estudiyo bese sihlola okhiye bangempela ngaphambi kokuthi sikukhombise ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-ecent quality lock. Manje kufanele ucabangele ukuthi ibhayisikili lakho libiza malini.
Uma kuyinto oyithanda ngempela, khona-ke ufuna ukuyinakekela. Ngakho-ke amakhilogremu angamakhulu ambalwa wokukhiya akuyona imali eningi ongayisebenzisa ngokuhambisana. Kepha ungachitha u- £ 10 ukhiye.
Kukuwe ngokuphelele. Ngangihlala ngisebenzisa inani eliphakeme ngangokunokwenzeka futhi ngithole ukukhiya okungcono kakhulu, uma kungenjalo ukukhiya okuningi, ngikunikeza ezinye zezinhlobo zamalokhi emakethe nokuthi yini enhle ngayo nokuthi yini engekho. Ake sibheke i-D-lock yakudala kuqala.
Ngakho-ke lawa aziwa ngokweqiniso njengokhiye bamabhayisikili anephrofayili ka-D, ngokuyisisekelo uma uwubeka ohlangothini lwawo. Lokhu okukhethekile kwenziwa yi-ABUS. Sinokukhethwa lapha ongakubona, kusuka kumikhiqizo ehlukile.
Sinezingidi ezithile ze-kryptonite, sinezingidi ezithile ze-ABUS futhi sinamanye ama-hiplok. Ngamunye wabo une-quirks yakhe nohlobo lwabo lobuntu, olufanele izinhlobo ezahlukahlukene zabasebenzisi, leli yi-granite, lokhu kusinda kakhulu. Kukhiye okusindayo impela.
Ilungele ukukhiya ibhayisikili lakho ngokuphelele noma kuphi, ukumelana nokugqwala, zonke lezo zinto. Kepha inkinga ukuthi kunzima kakhulu. Akuyona inhlobo yokukhiya ofuna ukuyifaka ebhayisikili lakho futhi empeleni awufuni ukuyiphatha uzungeze esikhwameni sakho.
Ngakho-ke lezi yizinto okufanele uzicabangele nganoma yiluphi uhlobo lokukhiya. Mhlawumbe lesi kungaba yisisekelo esihle kakhulu ongasisebenzisa ekhaya, yize sihlala sisho ukuthi izingidi zamaketanga zingcono ekhaya ngoba kuningi okungenziwa ngazo. Lokhu kungahle kube kuhle uma ukhiya ibhayisikili lakho endaweni ehlala njalo nsuku zonke, ngokwesibonelo esiteshini sesitimela, uma ungumgibeli, uma unendawo yokubeka amabhayisikili ehhovisi lakho noma emsebenzini, isibonelo.
Ungakushiya lokhu ngaphandle, njengoba kungamelana nokugqwala futhi ngokuvamile akukho okuphikisana nokukhiya okunjalo. Futhi ungaqaphela okuthile okukhethekile ngalesi sikhiya, i-granite, enephrofayli eyisikwele iphrofayili eyisikwele iyenza imelane kakhulu nokusika njengoba ungakwazi ukusika izinhlangothi zombili, awukwazi ukumane usike elilodwa bese ujikeleza ngokukhululeka. Lokho kusho ukuthi, uma usika okuthile okujiyile, uwuhlobo lweqhawe ngoba yilolo hlobo lokukhiya oluhlanya ngokweqile.
Kepha ama-D-Locks eza ngosayizi abancane kakhulu njengale. Into enhle ngosayizi abancane ukuthi iyaphatheka kakhulu. Lokhu empeleni kunesiqeshana sebhande.
Ivela eHiplok, inkampani egxile ekukhiweni okuphathekayo, ngakho-ke kungumqondo omuhle kakhulu. Lokhu futhi kukhiye okuphephe kakhulu. Ilinganisiwe ithengiswe ngegolide elithengisiwe, okuyisilinganiso esiphakeme kakhulu ongasithola ekukhiyeni.
Umkhukhu ophephe kakhulu, muhle futhi ujiyile. Futhi ngezinga elithile iketanga elincane elinjengaleli, yize kunzima kakhulu ukulisebenzisa ebhayisikili kuye ngokuthi ulikhiya kuphi ibhayisikili lakho, empeleni limelana kakhulu nezindlela eziningi amasela angazisebenzisa ukusika. Ophakamisa amabhodlela amancane ahlukana phakathi ikham ikhiya, ngeke uyithole ngempela eyodwa ekukhiyeni okunjengale.
Kuncike ekutheni ungayisebenzisa ebhayisikili lakho futhi nomaphi lapho ukhiya khona ibhayisikili lakho, kungaba umqondo omuhle kuwe. Ngakho-ke ungathola ezinye izinketho ezihlanganisiwe noma ngezingidi ezintsha. Lesi esivela eKryptonite, isibonelo, sibuye sibe nesandiso.
Ngakho-ke kukhombisa nje ukuthi ungakusebenzisa ngendlela ehluke kancane, noma incane kakhulu. Ngakho-ke inenzuzo yokukhiya okukhudlwana ngosayizi omncane, ohlangene ngokwengeziwe. Ubuye uthole ezinye izinketho eziza nezandiso zekhebula.
Kungumqondo omuhle. Ezweni elihle ufuna ukunamathisela igama lakho eliyinhloko entweni futhi okungcono uma ukwazi ukuxhuma amasondo akho nganoma iyiphi indlela akudingeki uwasuse ebhayisikili. Ngakho-ke ngokuyisisekelo, ungakhuphula ukuvikela onakho ngokukhiya ibhayisikili lakho eliningi.
Yebo, lapha sinezixazululo zalabo abahamba ngokukhanya futhi ngokuyisisekelo bafuna ukusethwa okuhlanganisiwe. Ngakho-ke lokhu kusonga okhiye nokunye okunjalo. Zonke izingidi ziyatholakala ngamazinga ahlukile.
Ngakho-ke lokhu kulula impela. Kukhanya kakhulu, ungayifaka emhlane wakho, noma iphaketheni lakho, futhi ikunikeza ukuphepha okuhle kakhulu. Kepha benza nezinguqulo ezisindayo ngendlela efanayo ezinamandla kakhulu, ezisebenza kahle kakhulu futhi ngenxa yezimo zabo awukhawulelwanga lapho ungakhiya khona ibhayisikili, okuyiqiniso esizongena kulo kamuva ku-athikili futhi lokho empeleni baluleke kakhulu.
Udinga ukwazi amandla engidi, izinketho ezilula lapha, futhi, ngaphambi kokuthi siqhubekele ekukhiyweni kwamaketanga. Akufanele nakanjani usebenzise into efana nale wedwa. Lezi zingadilizwa kalula.
Zikulungele ukusetshenziswa isb. B. kurufu lwebhayisikili lekhathuni lakho qiniseka ukuthi ibhayisikili lakho linamathiselwe kulo.
Lezi zibopho ezikhethekile zekhebula empeleni ziyizintambo zekhebula lensimbi. Ngithwala ezimbalwa zalezi ngaso sonke isikhathi, esikhwameni sami, emsebenzini wami wansuku zonke, ngoba zingaba wusizo kakhulu kulawo makhefu amancane ekhofi ezindaweni lapho ungabona khona ibhayisikili lakho, ch ibhayisikili lakho, okungenzeka ubulifuna ulahle umzuzwana. Kepha ungalokothi usebenzise ilokhi ekhanyayo enjengale noma ngisho nale nhlanganisela encane yokukhiya lapha evela ku-ABUS, ungayisebenzisi njengenye indlela yokukhiya okuphephe ngempela.
Lokhu kungezwe okuncane nje ukuhamba nakho ngenkathi ugibela, njengokuvimbela okuncane, kepha ukuvimbela kuyisihluthulelo lapho. Manje-ke kukhona ukukhiya kwamaketanga. Manje lezi zinto zinesisindo sethani.
Ziqine kakhulu, zenziwe ngensimbi eqinile, zinezindlela zokuvala izivimbamgqomo, zinobufakazi be-asidi, cishe zimelana nayo yonke into. Kepha inhlawulo yokugqoka ingidi kanjena ukuthi basinda ithani. Ngisho nasesikhwameni bayazungeza yonke indawo ngakho-ke udinga ukucabanga ngokucophelela ngokuthi uzisebenzisela kuphi.
Kungakho ngincoma ukukhiya kwamaketanga okusetshenziselwa ekhaya noma mhlawumbe okuhlala unomphela njengawe kunento efana ne-D-locks enzima. Kepha kukhona uhhafu wendlu. Manje iHiplok yenza izingidi zamaketanga ongakwazi ukugqoka njengebhande.
Umphetho ngezilinganiso ezahlukahlukene. Le yinguqulo elula, lokhu kufana neSold Secure Silver. Kepha futhi banokuphela okusindayo, njengezinga legolide.
Le yingxenye esindayo kakhulu yekhithi, kepha indlela yokukhiya uqobo ingagqokwa njengebhande lokugoqa ibhande futhi empeleni uyiqhelele le nto okhalweni lwakho. Inemininingwane ebonakalayo ukuze ukwazi ukugibela ibhayisikili lakho okhalweni lwakho ngayo futhi ngokusobala ukuthi iyisikhiya esisindayo kodwa uma isisesinqeni sakho kuyasiza ngokumangazayo ukwazi ukuthi uneketanga eliqinile kuhle futhi awubekelwe imingcele lapho ungayisebenzisa khona. Ngakho-ke uma ukhiya ibhayisikili lakho ezindaweni ezahlukahlukene, ukukhiya ngamaketanga kungaba yindlela enhle kuwe.
Yikuphi ukuvikeleka onakho ngokwesikhiya, indawo lapho ufuna ukukhiya khona ibhayisikili lakho ibaluleke ngendlela efanayo. Isibonelo, uma wehla ngomhubhe omncane lapha, ungacabanga ukuthi indawo enjalo ilungile. Nansi ujantshi omuhle, ophephile ukukhiya ibhayisikili lakho.
Inkinga eyodwa ngalokhu ukuthi isendleleni eshayiwe ngakho-ke lokhu kunganikeza noma isiphi isela elingakajwayeleki ithuba lokuthi lisebenze kukhiye wakho. Uma unokhiye wekhwalithi enhle bazosebenzisa ama-angle grinders, noma yini eyenza umsindo omncane. Ngakho-ke uma wenza kube lula ngabo ngokungabi sesidlangalaleni, lokho akubukeki kahle.
Ngakho-ke ake sibheke ezinye izibonelo zezindawo zokugwema izihibe zebhayisikili lapha abantu abaningi basebenzisa le ndawo ukukhiya ibhayisikili futhi ungacabanga ukuthi empeleni iyindawo enhle yokukhiya ibhayisikili. Kepha unephutha ngokuphelele. Empeleni lena indawo embi kabi ukukhiya ibhayisikili futhi isizathu esisodwa kungaba ukuthi, kunamabhayisikili amaningi kakhulu lapha, indawo elula impela ukuthi isela elijwayelekile lingadlula lizame isandla salo ebhayisikilini lakho bese lihambisana ne Abashayeli be-action Delivery, ngakho-ke banesikhwama esikhulu sokulethwa futhi bafika ezindaweni ezinjengalezi, bakhothama ukulingisa ukuvula ibhayisikili kodwa empeleni bazama abasiki bezinhlamvu noma noma yini abanayo bese bemane begibela ibhayisikili elishiwoyo ukusuka kulokho.
Njengoba ngishilo ngaphambili, ukuvuleka kuyinqubomgomo engcono kakhulu. Yilokho kanye amasela akwenzayo. Futhi, ukugqamisa ezinye izindawo ezingabazekayo ukukhiya ibhayisikili lakho, isiteshi sesitimela siyisibonelo esihle.
Kwesinye isikhathi uyaphoqeleka. Uma udinga ukukhiya ibhayisikili lakho eduze kwesiteshi sesitimela, esinye salezo zixuku siqinisekisa ukuthi siseduze neCCTV lapho singabonakala khona. Ngokuyinhloko, ufuna ukuthi wonke amasela angosomathuba abe nethuba elincane lokusebenza ngebhayisikili lakho, hhayi ibhayisikili lakho.
Yilelo igama lomdlalo. Lapho uvala amabhayisikili ezikhungweni zedolobha, kunento eyodwa yokugcina okufanele uyikhumbule: khiya ibhayisikili lakho lapho ulikhiya kusihlwa, isb., Eduze nanoma yikuphi okunempilo yasebusuku enomsindo.
Manje sonke sesiwabonile amabhayisikili. Ngesinye isikhathi bebezivalele benyathelwa, amabhayisikili egobile, lokho kungenxa yokuthi ngeshwa basendaweni embi. Akulona iphutha lomnikazi, yimpilo yasebusuku nokuxokozela nakho konke okunengqondo lapho ukhiya khona ibhayisikili lakho.
Manje njengoba sengikhona, empeleni le yindawo enhle impela. Ngakho-ke unezibambo ezinhle, eziqinile, okusho ukuthi kunamaphuzu amaningana lapho ungakhiya khona ibhayisikili lakho. Ungayithola ibe yinhle futhi usondele ngokuphakamisa i-latch ngaphezulu kojantshi.
Kusemgwaqeni omkhulu ngakho-ke kunemigwaqo engaguquguquki ezosusa isela njengoba kungenzeka ubone ngemuva kwami, abantu abaningi behamba bephikisana nombango omuhle wokukhiya ibhayisikili. Ake sibheke masinyane izinketho nezitayela nezindlela ongaqedela ngazo ibhayisikili. Futhi ngizosebenzisa lokhu njengesibonelo esihle.
Nomaphi lapho ukhiya khona ibhayisikili lakho kunezinketho eziningi ngamalokhi owakhethayo nokuthi ungawasebenzisa kanjani. Ukuthuka okuhle okuphephile, ngine-D-lock eqondiswa ezungeze ukuthuka futhi isongwe ngesondo langemuva ngemuva kwebhayisikili. Lokho kungukhiye njengoba ungeke ususwe ebhayisikili.
Nginayo nenye ikhebula lokuphepha elengeziwe, lena iyintambo ye-Kryptonite, ngiyikhiye lokho ezungeze imfoloko nangesondo langaphambili, ngazibuyisela kuyo ngangena engxenyeni. Ngakho-ke ibhayisikili liphephe impela kuleli qophelo. Nginebha yokuphatha ehlala kuphela engxenyeni engenhla ukuze ihlale ngokuphepha.
Sethemba ukuthi akekho ozophazamisa lokho. Uma ungenayo intambo yokwelula nawe manje, kepha unokhiye omuhle, omkhulu, omude, ngizokukhombisa iqhinga elincane elipholile engithanda ukulisebenzisa ukufaka nje ungqimba lwezokuphepha. Lokhu akusebenzi ngaso sonke isikhathi manje futhi ungabacasula abantu uma wenza lokhu ezindaweni ezithile, kepha lokhu kuthuka kusebenza kahle kuwo.
Ibhayisikili lingaphezulu kojantshi, ngakho-ke ngokuyisisekelo lilenga ngaphezu kokuphakama kwemoto ngenhla komgwaqo futhi lisebenzisa ilokhi ukuyivikela kuyo ngasikhathi sinye, njengoba nje ubungakwenza eceleni komgwaqo. Kepha iqiniso lokuthi ibhayisikili likolunye uhlangothi lukaloliwe lukwenza kube nzima kakhulu ukusebenza kulo. Uma kunzima ukusebenzela, kuzothatha isikhathi ukweba ibhayisikili, futhi mancane amathuba okuthi kusetshenzwe ngalo.
Ngakho-ke kuwukugenca okuhle engikusebenzisa kakhulu. Manje iluphu lebhayisikili elinjengaleli lakhelwe ngqo ukukhiya ibhayisikili futhi empeleni leli lisendaweni ekahle. Yindawo enhle kakhulu ematasa, kunezihlalo eziningi zomphakathi yonke indawo, abantu abaningi bathokozela ikhofi namasangweji nokunye okunjalo.
Ngakho-ke yindawo embi kabi ukuthi isela lichithe isikhathi esiningi lisebenza ebhayisikili. Ubonile noma ubonile ukweba ibhayisikili. Ngakho-ke lena indawo enhle.
Kepha kunezinto ezimbalwa okufanele uzigcine engqondweni. Ngokusobala unokhiye wakho, ngakho-ke ukhiye omncane onjengalona uzowenza kahle umsebenzi. Udinga ukuthi uqiniseke ukuthi ushayela idrayivu yakho ukuze ingashibiliki ngephutha futhi isuse umsebenzi wakho wokupenda.
Manje ngithanda ukubeka okwami ​​crank; J ngokwesibonelo lapho ngiphakamisa okwami ​​ngemuva kwalapha empeleni kuthwala isisindo sebhayisikili kunyaweni nasebusweni futhi ngingabeka ukhiye oyizungezile bese ngiyibamba kokuthunyelwe ngakho-ke ibhayisikili eliphephile kakhulu lisazoba sengozini . Kukuwe ukuthi ufuna ukufaka engcupheni lokhu noma uma ufuna ukuyixhuma kubhayisikili nge-lock lock, uma ufika kokuthunyelwe okunje futhi isikhala okuwukuphela kwaso singolunye uhlangothi lwesivele sikhona? Bheka isitayela sebhayisikili. Uma kuyisigaxa esidala esinjengalesi, bona ukuthi kukhiyiwe kanjani nokuthi kuphathwa kanjani.
Kungenzeka yini ukuthi uzovumela ibhayisikili lakho lishelele? uzinakekele kahle noma ungazinakekeli ezakho lapho zivula ezakho? Kufanele nakanjani ucabangele. Ngakolunye uhlangothi, bengingeke ngilithole libi kakhulu ibhayisikili. Luhambo ngokubukeka kwalo, inokhiye weKryptonite futhi inentambo yokwelulwa, ekhombisa ukuthi umnikazi waleli bhayisikili uyalinakekela ibhayisikili labo futhi ngethemba lokuthi angalinakekela elakho.
Ngakho-ke cabanga ngalokhu uma ufaka phakathi kwakho empeleni, kepha imithetho efanayo iyasebenza. Yiya ekuphepheni okuphezulu ongakwenza. Uma kunjalo, bengingasebenzisa iHiplok ngaphandle kwezinkinga.
Ngingasebenzisa ukhiye weKryptonite D, ngingasebenzisa ukukhiya kwe-ABUS okuphambene, kepha leyo yinto enzima ukuyigijimisa. Kufanele ube nokukufanele. (Amasondo ebhayisikili purr) Yebo, into engingakayithinti kude kakhulu kulesi sihloko yindlela amasela akhetha ngayo izingidi.
Kunezindlela eziningana amamodeli weGold Secure ahle kakhulu. Okungenani kuze kufike ezingeni lapho ungasusa khona ibhayisikili lakho ngokushesha, umsebenzi othatha isikhathi esincane. Okulandelayo ukuthi ungabamisa futhi ubashaye ngesando, kepha umsebenzi onzima impela weShackle In The Castle uzokumela impela lokho.
Okushiya ezinye izinketho ezintathu: ophakamisa ibhodlela, ophakamisa ibhodlela usetshenziswa kuphela ngohlobo lwe-D yokukhiya, kulokhu awunakuthola lapho ngoba lokho kukhiye okuhlanganisiwe ngakho-ke ukukhiya okuhlangene nokunwetshwa kungumbono omuhle ezindaweni ezisemadolobheni. Okukhudlwana i-U-Lock noma i-D-Lock, izinkinga eziningi ongaba nazo ngalolu hlobo lokuhlaselwa. Abanye bangabasiki bemishudo impela, ama-bolt cutters ngeke asondele ndawo kunoma yini enjalo.
Bazodinga umfana omkhulu futhi omkhulu ukusika lokhu. Abasiki beBolt bazokwenza izintambo kuphela. Yize bekwenza, njengoba ubonile ngaphambili, yenza intambo ibukeke njengebhotela elincane, empeleni.
Ngakho-ke qaphela lapho usebenzisa into enjengale. Umuntu wokugcina uzoba ukuhlasela kwe-angle grinder impela Thenga It. Ngakho-ke, ukukwenza kuthubhu ephezulu lapho, leyo akuyona indawo enhle yalokho.
Ngakho-ke uma ubungasebenzisa okuthile okufana neketanga lomsebenzi osindayo, qiniseka ukuthi uchungechunge alukho ndawo eduze komhlaba. Ufuna ibe phezulu ngangokunokwenzeka. Uma ephansi angasebenza ngakho.
Sebenzisa abasiki abakhulu nabalimi. Kufanele usebenzise amandla amaningi, kwesinye isikhathi unengalo eyodwa phansi enye ingalo iyayicindezela. Ngakho-ke cabanga kuphela ukuthi ilokhi likuphi lapho ulikhiya ngebhayisikili lakho. (umculo we-quirky) Mhlawumbe uqaphele ukuthi anginayo ingidi ebhayisikili lami, kodwa ngimane nje nginekhofi le-sassy ngenkathi ngigibele futhi ngine-alamu lami lebhayisikili likaGarmin futhi into emnandi ngalo ukuthi uma umuntu ekhona ibhayisikili ligijime lonke, ngethemba ukuthi i-alamu iyakhala bese iyangimisa.
Chris! Akuyona ngisho i-e-bike, buddy. Yebo, lokho kusebenza kahle. Ngivele ngiyicime kuhlelo lokusebenza.
Lapha nalaphaya kufanele ume bese ubeka engcupheni. Ngakho-ke ngilibhekise phansi ibhayisikili lami ngaliphendula iHa rd Gear, empeleni okwenzekayo lapho othile engena ebhayisikili bese eqala ukuhamba ngebhayisikili nguChris! Kwenzekani-lokho wenzani mlingani? Kuyi-e-bike. Buyisa.
Labo bafana be-EMBN, bafuna nje ibhayisikili langempela lezintaba ngithini? (Buzz Wheels buzz) Ngakho-ke indawo yokugcina yokugcina, uma ufuna isitobhu sekhofi le-sassy, ​​empeleni ngisebenzise isigqoko sami njengokulungela ukukhiya okuncane, ngivele ngisibeke emasondweni ami angemuva, uma umuntu esisusa sizoshelela futhi baphumelele ' hamba ngempela. - Ugh! Ngakho-ke akulungile, Nkulunkulu, ngifuna elinye lalawo mabhayisikili angenayo imoto noma ibhethri! - Vele ubuyele ku-EMBN, qhubeka! futhi lokho makube yisifundo kini. Kepha ngokungathi sína, ungasebenzisi noma iyiphi yayo.
Shiya ungazihluphi ngalezi zinto. Okudingayo ngempela ukukhiya okuhle, okuqinile nokukhiya ibhayisikili lakho kahle. Ngisanda kufakazela ukuthi noma yikuphi lapho ukhiya khona ibhayisikili lakho akunakunqotshwa, kepha unganciphisa ubungozi ngokusebenzisa ukukhiya okuhle kakhulu ngakho-ke hamba ukhethe lapho ukhiya khona ibhayisikili lakho.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kube wusizo kuwe. Ukuthola ezinye izindatshana emthanjeni ofanayo, uma ufuna ukubona ukuthi ungayifaka kanjani ihange lomhlabathi engicabanga ukuthi libaluleke kakhulu kuwe, chofoza lapho ukuthola zonke izinhlobo zamathiphu okuphepha ongacabanga ngawo. I-CCTV, umshuwalense, konke lokho.
Sethemba ukuthi uthole ukuthi le ndatshana iyajabulisa. Okungenani ngethemba imininingwane ethile ekufanele. Ngakho-ke, sinikeze isithupha bese uqhafaza inkinobho yokubhalisa futhi nakanjani insimbi yesaziso encane ukuze uthole isaziso ngaso sonke isikhathi lapho sibhala i-athikili.
Kulungile, ngiya emsebenzini. Ngizokubona ngemva kwesikhathi. (Beep) Ngakho-ke ngiphendule ibhayisikili lami ngabhekisa phansi, ngaliguqula laba yigiya, ngakho-ke uma umuntu othile engena kulo ngokuyisisekelo wonke amagiya azokonakala, ngeke- (Chris wheel whir) Chris! Chris! - Ugh, uDoddy ongalungile! - Akuyona ngisho i-e-bike, buddy! (Ukuthukuthela okuthukuthele) (ehleka)
Kufanele ngilikhiye kuphi ibhayisikili lami uma ngingenawo umugqa webhayisikili?
Khiyaeyakhoibhayisikilientweni ende futhi / noma okunzima kakhulu ukuyigudluza, njengesihlahla, uphawu lomgwaqo, isigxobo sokukhanya, noma uthango.Umaakukho lutho oluzungezileingidikuya, gcina iibhayisikiliephephile okungenani ekhubazeni amasondo akho.Umaawunayo i-ingidinhlobo, yenza eyakhoibhayisikilikunzima ukugoqa ngangokunokwenzeka.
yebo ekuseni sekuzungeze u-4: 30 ekuseni savuswa cishe ehoreni eledlule ngumuntu owantshontsha amabhayisikili ethu ngenkathi silele, ngenhlanhla bakwazi kuphela ukweba elinye lamabhayisikili abawathola ngokoqobo njengamabhotela Ilokhi, yeka ukukhiya okungambi eqolo, awazi ukuthi yilokho kuphela okuphakathi. baphinde bavule lokho okuvulekile okucasula ngempela, le nto iyacasula kakhulu ukuthi balimaze i-rack ngakho-ke sidinga ukuthola ilokhi entsha. Awunalutho angithi? Ngiqonde ukuthi, ngicabanga ukuthi kufanele ubheke ohlangothini oluhle lwezinto ozaziyo, ngiyethemba ukuthi noma ngubani ozithathe ubezidinga ngempela. babekwazi abakwenzayo. zihlelwe ngokushesha okukhulu futhi. konke kuhambe ngemizuzwana, ngakho-ke, nathi sikumlimi omusha, manje siseMontenegro, wamukelekile, sinobusuku bokuqala montenegro ngiyabonga ngineqiniso lokuthi akukubi kangako, ngeke kusivimbe ukuvakashela i-montenegro kujabulele ngoba ngiyazi ukuthi yizwe elihle engake ngaba kulo ngaphambili futhi angisakwazi ukulinda ukwabelana ngalokhu nalona wesifazane othandekayo, noma ngabe imizuzu embalwa yokuqala besilapho yayiyinhle yeahokay ngokushesha phambili amasonto amabili sise-Albania isexwayisi se-spoiler sishintshe ibhayisikili le-Push ngale nto enhle esiyicoshe enhlokodolobha iTirana ezintweni eziningi esingakhetha kuzo kodwa lena akuyona entsha, empeleni iyasetshenziswa kodwa iphelele, ilungile. besingafuni ngempela entsha asifuni ukulengisa isanqante kubantu abafuna ukuntshontsha amabhayisikili futhi siphinde sancoma ukuphepha ngizokukhombisa ukuthi woza lapha sinochungechunge olukhulu kakhulu oluzosivusa uma umuntu uzama ukweba ngenkathi bebuyile ulele.
IBeastie ingidi nayo sinakho lokhu ebengikufuna ukuthi kube isikhiya esimise okwe u esinganqunywa abasiki bengqephu bakho futhi sasihlanganisa futhi ngakho-ke uma sikwazi ukubasusa ngeke besakwazi ukuqhubeka ngaso . Ngakho-ke ngiqonde ukuthi, yilokho kuphela ongakwenza uma beyifuna, bazobathatha noma kunjalo, ngakho-ke akusenzi ukuba siyeke ukuba nebhayisikili, kodwa cha, ngiqonde ukuthi, uzonga imali eningi noma ngabe uyathenga ibhayisikili elisha uzokonga imali eningi ekupakeni futhi kuyinto enhle kakhulu emhlabeni ukuletha ibhayisikili, yebo, ungakuvumeli lokho kukudicilele phansi abantu kuyisipiliyoni esimangazayo esinethemba lokuthi okungenani sinalo sikusizile wanquma ukuthi uza nebhayisikili noma cha, ungakuvumeli likubambezele, kulungile nokuthi yini esizokushiya nayo ngale ndawo enhle esiyisebenzise lapha e-Albania izolo ebusuku, izwe elihle kangako ozolithola ube namabhulogi amahle yebo LAPHA NGOKUVIKELA!
Ungakwazi ukukhiya ibhayisikili noma kuphi?
Ungalokothiingidieyakhoibhayisikilikocingo lokuphepha oluzungeze ama-condos, amabhizinisi, nomanoma kuphiokunye edolobheni. Abaninimabhizinisi abaningikuthandaAbakwazisi ukuba nabagibeli bamabhayisikili abasebenzisa ucingo lwabo lokuvikela insimbi njengendlelaingidiyaboamabhayisikili. Uma uthango lulimele ngenkathi yakhoibhayisikiliinamathele kuso,wenangizoba necala.
Ngabe ukusonga amabhayisikili kuvikelekile?
Noma iABUS Bordo Granit 6500 ithole OkuthengisiweKuphephileIsilinganiso segolide, ngokuvamile,Amalokhi okugoqa amabhayisikiliakunjalo nezeivikelekilenjengoba uDizingidi. Umehluko kuukuphephaluseceleni, kephaAmalokhi okusongabahlushwa ukukhubazeka okungaphezulu kuka-Dizingidi.
Usiphatha kanjani isikhiya ngebhayisikili?
Faka u-D wakhoKhiyaEsikhwameni sePannier /IbhayisikiliIbhasikidi Lapho Uhamba. Uma usebenzisa i-pannier noma ibhasikidi ku-ibhayisikili, kufanele ukwazi ukulinganisa i-D yakhoingidiphakathi lapha. Ama-panniers nobhasikidi kumnandi; bayakuvumelaezokuthuthaizinto eziningi ngasikhathi sinye ngaphandle kwesidingothwalakubo emhlane wakho ngerakhi.
Ikuphi indawo engcono yokufaka ukhiye webhayisikili?
Uma ufaka ukhiye wakho webhayisikili kuzimele webhayisikili lakho, lifake phezulu kushubhu yesihlalo, maphakathi nethubhu yakho ephansi noma engaphansi kwethumbu eliphezulu. Lokhu kuzogcina ukhiye wakho ungangeni futhi kuzoqinisekisa ukuthi isafinyeleleka ekusetshenzisweni okulula.
Kuphephile yini ukugcina ingidi yami yebhayisikili isesandleni sami?
Noma yini oyenzayo, qiniseka ukuthi awuthumeli isikhiya sakho sebhayisikili esisongwe ngohlaka lwebhayisikili lakho, lokhu kuzodala ukulimala kwebhayisikili lakho ngokuhamba kwesikhathi. Akufanele futhi ugcine ibhodi yakho yebhayisikili esandleni sakho ngenkathi ugibela, lokhu kuyingozi njengoba uhlala udinga izandla zakho lapho uhamba ngebhayisikili.
Ugcina kuphi i-U-lock yakho uma ugibele?
Ubhaka, u-Osprey Radial unomphathi ozinikele we-U-lock. Ngasohlangothini lwe-rack, isilinda esibekwe kurack, U ukhiyelwe ngaphandle kwendawo yokuhlala. Ukulwa kancane, okusiza abahamba ngezinyawo ukuthi banake.